ThiEYE Dr.X RC Nyochaa - 1080P na FPV Ndekọ maka € 70 | Akụkọ akụrụngwa
N'iji eziokwu ahụ bụ na ekeresimesi na-eru nso, anyị ga nyochaa a drone nke bu otu n’ime ngwa ahia nke n’achọ ka kpakpando nke onyinye ụbọchị ndia tinyere ngwaahịa ndi ọzọ dịka Igwe eletrik nke na-emekwa ka ụjọ. Oge a ka a ga-enyocha ngwaahịa a the ThiEYE Dr.X RC minidrone, a ngwaọrụ gbakwasara ọrụ ndị chọrọ malite na-eme ihe mbụ onye na-eduzi (Onye mbu elere anya, nke amara ya nke oma FPV) na etinyeghi ego di elu. ThiEYE Dr.X bụ ngwaahịa siri ike, dị mfe ijikwa yana na ị nwere ike nweta ihe karịrị € 70 site na ịpị ebe a.
1 Ezigbo imewe na akụrụngwa
2 Flight site na Ngwa
3 Igwefoto Drone
4 Ọdịnaya nke igbe, ọnụahịa na nnweta
5 Isi ihe na ihu ọma
6 Ihe megide
Ezigbo imewe na akụrụngwa
Ihe mbụ nke na-adọta uche nke mmiri a ozugbo n'ime igbe bụ obere akụkụ ya na ọkụ. Nke a bụ drone na-atụle 11.00 x 11.00 x 4.30 centimeters ma na-atụle 85 gram, na-eme ka ọ zuo oke iji bufee ya na obere akpa ọ bụla na-enweghị iwere ohere dị ukwuu. Ihe eji eme ihe nke drone bu plastik na imeputa ya buru ihe mbu, ya na isi ya nwere anya abuo n’ime ya bu oria acha anụnụ anụnụ n’enye ya aka puru iche.
Ndị na-akwalite ụdị ahịhịa ahụ, ọ na-abịa iji nchedo nhọrọ iji gbochie ihe ọghọm ọ bụla site na imebi eriri. Dị ka eziokwu dị omimi, ngwaọrụ ahụ enyeghị ya ụdị ọdịda ọ bụla ya mere, anyị ga-ada afọ ya ozugbo, ihe ọ bụla dịtụ ntakịrị ka ọ dị m egwu ma ọ bụrụ na anyị echebara na bọtịnụ ngbanwu / ngbanyụ nke ngwaọrụ ahụ dị na ala nke mmiri na a ngwa anya ihe mmetụta - barometric iji tụọ ịdị elu ọ ruru n'oge ụgbọ elu ahụ, yabụ anyị na-adụ gị ọdụ ka ị zere ọdịda ọdịda na-enweghị oke n'ihi na ha nwere ike imebi.
O nwekwara a 3-gyroscope axis na 3-axis accelerometer nke ahụ ga-eme ka ngwa ọrụ ahụ kwụsie ike n'oge ụgbọ elu.
Gbọ elu site na App
ThiEYE Dr.X RC enweghị njikwa dịpụrụ adịpụ ya a na-eme ụgbọ elu ahụ dum site na ngwa dị maka iOS na gam akporo ị ga-arụnye na ekwentị gị. Ojiji ya dị mfe, anyị ga-etinye ngwa ahụ na mkpanaka gị, gbanye drone site na iji bọtịnụ dị na ala ya, chere sekọnd ole na ole maka sistemu ahụ ịmalite 2.4 GHz WiFi ma jikọọ ekwentị gị na netwọk WiFi nke ga-egosi na aha drone.
Ozugbo emere nke a, anyị na-emeghe ngwa ahụ, gaa na ọnọdụ ofufe na anyị nwere ike wepu ma bido ịkwọ ụgbọ mmiri ọhụrụ anyị. Gbọ elu ahụ dị mfe, ikekwe ọ ga-adị nwayọ nwayọ mana nke ahụ ka mma na ngwaahịa nke ụdị a maka ndị na-anya ụgbọelu. Ọ na - enye gị ohere ịhazi ọtụtụ nhọrọ dịka ọ flightụ ụgbọ elu ma ọ bụ site na iji gyroscope nke smartphone, ọkwa ọsọ ọsọ abụọ dị iche iche, ụgbọ elu na ọnọdụ nkịtị ma ọ bụ ụgbọ elu zuru oke, njikwa njikwa America (nke bụ nke anyị na-ejikarị na Europe) ma ọ bụ na ụdị Japanese, wdg. Ọ nwekwara a mmezi button, ọzọ na-eme ka a nwayọ nwayọ 360º nke na-enye ohere ịgbanwe ndu nke ngwaọrụ a na nke ikpeazụ maka njem mberede na ọdịda.
La batrị drone bụ 650 mAh nke pụtara oge ụgbọ elu nke ihe dị ka nkeji 8 na ikike zuru oke, nkịtị maka ụdị ụgbọ elu a. Oge nkwụ ụgwọ bụ awa 2, yabụ ọ bụrụ na ị jiri ya nke ukwuu, anyị na-akwado ka ịzụta batrị nke abụọ nke ga-enyere gị aka ịnụ ụtọ ụgbọ elu ahụ. N'ihe banyere ike ọkụ batrị n'oge ụgbọ elu ahụ, ọ nweghị ihe ọghọm nke ihe ọghọm, ebe ọ bụ na ndị drone na-achọpụta ya ma na-agbadata ngwa ngwa iji mee ka ụgbọ mmiri na-achịkwa na-enweghị nsogbu.
Okirikiri ụgbọ elu dị mita 50 wee rute ihe dị elu nke mita 20. Anyị na-anwale ya na iPhone X na anyị enwetabeghị ụdị mgbaàmà ọ bụla ke ini udomo oro; Ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-atụle karịa na ọ bụ ngwaahịa dị ọnụ ala.
Nke a bụ otu n'ime ike nke ThiEYE Dr.X RC Drone ebe ọ bụ na ọ na-etinye a 8 MP mmetụta ike nke na-ewere ezi mma foto. Na ngalaba vidiyo, ngwaọrụ ahụ nwere ike ịdekọ ya na Full HD mkpebi na 30 fps.
Ọdịnaya nke igbe, ọnụahịa na nnweta
N'ime igbe anyị nke ThiEYE Dr.X RC drone na-abịa na drone n'onwe ya, ndị na-echebe ihe abụọ, anọ na-agbanwe propela, batrị 650 mAh, eriri USB micro maka ịchaji, ngwá ọrụ iji wepu ma tinye ndị na-agbagharị na ntuziaka onye ọrụ na Spanish, ihe a na-enwekarị ekele maka ụdị ngwaahịa a.
El ego ugbu a nke ThiEYE Dr.X RC bụ 71 € y Nwere ike ịzụta ya na ụlọ ahịa ntanetị Gearbest na ọnụahịa kachasị mma site na ịpị ebe a. Ọ bụ ezigbo atụ aro zụrụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ a ngwaọrụ na ihe oké ọnụ price, obere akụkụ na-enye gị ohere iji a awa ole na ole nke fun efe.
Batrị dịtụ obere
Enweghị nhọrọ iwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Analysis ThiEYE Dr.X RC, mmiri nke na-edekọ na 1080P maka € 70
Ihe kacha mma dFlow maka Black Friday